कसैकाे स्वार्थअनुसार घिसारिएको पूर्वाधार विकास
‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन’ पुस्तकमा जलस्रोतविद् अजय दीक्षितको एउटा लेख छ, जसमा पानीको अर्थ राजनीतिबारे चर्चा गरिएको छ । लेखभित्र 'फ्लस ट्वाइलेट' बारे एउटा प्रसङ्ग छ । विकसित देशहरूमा प्रयोग गरिने फ्लस ट्वाइलेट गरिब देशहरूमा समेत उनीहरूको नक्कल गर्दै प्रयोग हुँदै आएको छ । पानीको व्यवस्थित र सहज वितरण नभएको अवस्थामा त्यस्ता ट्वाइलेट उपयोगी देखिँदैनन् । पानी भए पनि एकै पटकमा १५/२० लिटर फ्लसमा बगाएर फाल्ने कुरा महँगाे पर्ने दीक्षितको तर्क छ ।
हाम्रो अवस्थाअनुकूलकाे ट्वाइलेट विकास हुनुपर्थ्यो । पानीको स्रोत र त्यसको उपयोग अनि हाम्रो आर्थिक सामर्थ्यलाई वास्तै नगरी यस्ता विकासको नक्कल गर्नु उचित होइन भन्ने उनको लेखको आशय छ । पिसाब गरेपछि पखाल्ने बेलामा मलाई सधैँ दीक्षितको उदाहरण याद आउँछ । एक पटक पिसाब गर्दा ३०/ ४० मिलिलिटर पिसाब पखाल्न २० लिटर पानी खर्चिनुपर्छ, जुन ट्याङ्करबाट महँगोमा किनेर ल्याइएकाे हुन्छ । अनि मन अमिलाे कसरी नहाेस् !
म बस्ने टोलमा केही भित्री सडकहरू पक्की हुन बाँकी थिए । केही भइसकेका थिए । पिच भएको केही महिनापछि खानेपानीको पाइप बिछ्याउने भनेर सडक भत्काइयो । सुरुमा पिच गर्नुअघि नै खानेपानीको पाइप बिछ्याउन गरिएको प्रयास सफल भएन । खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वय नै नहुँदो रहेछ । आ-आफ्नै पारामा सडक बनाउने, भत्काउने अनि अलपत्र छोड्ने गरेको धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।
गत वर्ष खानेपानीको पाइप राख्दा भत्केको सडक र पिच हुन बाँकी सडकको भाग ढलान गर्दा पिचभन्दा बलियो हुन्छ । त्यसका लागि बजेट पनि आउने भएको छ भनेर टोलमा उपभोक्ताहरू बीचमा छलफल भयो । धेरैजसो खुसी देखिए । तर, म र एक जना साथीले त्यो कुरामा असहमति जनायौँ । पिच नै गर्ने भए त ठीकै छ, तर यो त भित्री बाटो हो । दिनमा मुस्किलले ८/१० वटा गाडी र २० /३० वटा मोटरसाइकल गुड्ने ठाउँमा किन त्यो ८ इन्च बाक्लो ढलान गर्नुपर्‍यो ?
फेरि ढलान गरिएको सडकमा बालबालिका खेल्दा, हिँड्दा लडे भने ठूलै चोट लाग्न सक्छ । पिच गरेको भन्दा यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । अनि कुनै कारणवश खानेपानीको, ढलको समस्या आयो भने ढलान फुटाउन गाह्रो पनि हुन्छ । यस्तो ढलान त भल पानीले बगाउने, भिरालो सडक अनि ठूलाठूला ट्रक /गाडी दिनहुँ सयौँको संख्यामा गुड्ने ठाउँमा पो आवश्यक हो त भन्ने हाम्रो तर्कको सुनुवाइ भएन ।
पिचका लागि बजेट आउँदैन । ढलानका लागि मात्रै आउँछ, त्यसका लागि उपभोक्ता तयार हुनुपर्छ भन्ने जवाफ पाइयो । आएको बजेट खेर जान दिनु हुँदैन, ढलान गरेपछि वर्षौंका लागि ढुक्क हुन्छ, ढलान नै गरौँ भन्ने धेरैको सहमति बन्यो र बाटो ढलान गरियो ।
हामीलाई थोपरिएको त्यो ढलाने विकासको असर एक वर्ष नपुग्दै देखा पर्‍यो, असोजमै इनार सुक्न थाल्यो । यसबारे मैले एक जना इन्जिनियर साथीलाई सुनाएको थिएँ । उनले त झनै रहस्यमयी कुरा सुनाए । अहिले अलकत्राबाट पिच गर्ने कुरालाई भन्दा ढलानलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ, नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन केही वर्षयता निकै नै बढेपछि सिमेन्ट उद्योगहरूले लबिङ गरेकाले सिमेन्टको खपत बढाउन यस्तो गरिएको बताए । वास्तवमा हाम्रा विकास कसैका स्वार्थअनुसार घिसारिएका छन् भन्ने लाग्यो ।
अहिले ग्रामीण बस्तीहरूमा विकासका नाममा हुने गरेका डोजर आतंकसँगै गुण्डागर्दी पनि उत्तिकै मौलाएको छ । अघिल्लो वर्ष खनिएको बाटो वर्षे भलले बगाउँछ, अर्को वर्ष त्यही बाटोका लागि फेरि बजेट छुट्याइञ्छ । एक डेढ घण्टा डोजरले खोस्रेर मर्मत गरेजस्तो गर्ने र दशौँ लाख पचाउने गरेको गुनासो गाउँतिर सुन्न र देख्न सकिन्छ । स्थानीय जनता त्यसको विरोध, प्रतिरोध गर्ने हैसियत राख्दैनन्, गुण्डागर्दीको सिकार हुनुपर्छ ।
खानेपानीको मुहान जंगल नै मास्ने, बाढीपहिरो भू-क्षयजस्ता समस्या निम्त्याउने गरी खनिएका बाटोहरूको उपयोगिता कति छ, त्यसबाट के के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा वास्तै गरिँदैन । अन्य प्राथमिकताका विषयमा छलफल नै हुँदैन । प्राय: जनप्रतिनिधि भनिएकाहरू आफैँ वा उनीहरूका नजिकका आफन्त डोजरका मालिक भेटिन्छन्, डोजरे विकास पनि उनीहरूकै स्वार्थअनुसार थोपरिँदै आएको छ ।
देशैभर थुप्रै संख्यामा बन्दै गरेका र बन्ने क्रममा रहेका भ्यू टावरबारे भन्ने गरिन्छ- पर्यटक आकर्षण गर्ने गजबको थलो हुनेछ । पूर्वाधार, व्यवसाय, सुरक्षा केही नभएका दुर्गम बस्तीका डाँडाहरूमा भ्यू टावर बनाएर के देखाउने होला ?
अर्को चर्चित विकास हो, ‘भ्यू टावर‘ ! देशैभर थुप्रै संख्यामा बन्दै गरेका र बन्ने क्रममा रहेका भ्यू टावरबारे भन्ने गरिन्छ, पर्यटक आकर्षण गर्ने गजबको थलो हुनेछ । यसरी व्याख्या गरिन्छ कि पेरिसको आइफेल टावर, यूएईको बुर्ज खलिफाजस्तै लाखौ पर्यटक भित्र्याउने टावरहरू बन्न लागेका छन् । अन्य पूर्वाधार, व्यवसाय, सुरक्षा केही नभएका दुर्गम बस्तीका डाँडाहरूमा भ्यू टावर बनाएर के देखाउने होला ? कसैकाे स्वार्थ पूरा गर्नका लागि यसरी थोपरिएका भ्यू टावरे विकासमा पैसा स्वाहा बनाउने क्रम बढ्दो छ ।
शहरी जनघनत्व धेरै भएका बस्तीमै पनि आफ्नो मौलिक पहिचान झल्किने खालका संरचना बनाइँदैनन् । टावर बन्ने आसपासका केही जग्गावाला र दलालको हल्लाखल्ला र गफको भरमा भ्यू टावर बन्नुपर्छ भनेर प्रचार गरिन्छ, मान्छेहरूलाई थुप्रै अवसरका आश्वासन देखाइन्छ । भ्यू टावरसँगै बढ्ने चहलपहलबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विलासी सामग्रीका उपभोग बढाउने गतिविधि सुरु हुन्छ । सीमित व्यापारीले लाभ लिन्छन्, बाँकी जनतालाई केही मिल्ने देखिँदैन । आफ्ना स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक लाभ लिनेतिर चासो देखिँदैन ।
भिजिट नेपाल २०२० नजिकिँदै थियो, पकनाजोलबाट ठमेल जाने बाटो भत्काइएको रहेछ । त्यहाँ नाली गन्हाइरहेको हुन्थ्यो तर त्यसलाई छिटो बनाउने र सफा गर्नेतिर कसैको ध्यान थिएन । महिनौ अलपत्र थियो त्यो बाटो । ठाउँठाउँमा बेढंगको यतीको मूर्ति भने रातारात तयार पारिएको थियो । पर्यटनमन्त्रीले औपचारिक कार्यक्रममा यति लाख पर्यटक ल्याउँछौँ, उति लाख ल्याउँछौँ भनेर भाषण ठोकेको सुनियो ।
उपत्यकाका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको मतलबै नगरी भिजिट नेपाल २०२० घोषणा गरियो । यहाँको पूर्वाधार, होटल, सरसफाइ, सुरक्षा अवस्थाको तयारीबारे उनले चासो लिएर घुमेको, जानकारी लिएको देखिएन, तर उता अस्ट्रेलियामा आगो दन्केको बेला प्रचार गर्न पुगे ।
माथि चर्चा गरिएका (केही प्रतिनिधि उदाहरण) जस्तै थुप्रै गलत कार्यक्रमहरू विकासका नाममा हामीमाथि जबर्जस्ती थोपरिएका छन् । विकासको सन्दर्भमा हाम्रा स्थानीय तहदेखि विश्वव्यापी (ग्लोबल) अवधारणा कसरी अगाडि आइरहेका छन् ? तिनीहरूलाई ख्याल गरेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति योजनाहरू तय हुनुपर्ने हो । सयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्य कता छन् ? के हाम्रा विकासका अभ्यासहरूले त्यसलाई पछ्याउँदै छन् ? प्रविधिले निकट भविष्यमै ल्याउने नयाँ विकल्पहरू के के छन् ? हाम्रो आर्थिक सामर्थ्य के हो ? अन्य सीमा र बाध्यता के के हुन् ? उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरू के के हुन् ? कुनकुन कार्यक्रम सँगसँगै लैजानुपर्ने होजस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोजेको पाइँदैन ।
अहिले चलिरहेकै विद्यमान प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदा मस्ती गर्न पल्केको समूह, सजिलो र मानिसहरूलाई भ्रममा पार्न सकिने कार्यक्रम गरेर कमाउन पल्केको समूह, प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि दोहन गरेर कमाउँदै आएको समूह, भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारमा लिप्त नेता र तिनका कार्यकर्ताहरू, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर असारे विकासमा पैसा बगाउने कर्मचारीतन्त्रको जञ्जाल तोड्ने कुरा सचेत तप्काको पनि एजेण्डा बन्न सकेको छैन ।
निहित स्वार्थ (conflict of interest) को आधारमा अपव्याख्या हुँदै आएको र गलत अभ्यास र परम्परालाई निरन्तरता दिँदै थोपरिएको ‘विकास’ माथि प्रश्न गर्न र प्रतिवाद गर्न हामी चुकिरहेका छौँ । अहिले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न लाग्यो भन्दै गर्दा फेरि पनि राजनीतिक मुद्दामा मात्रै बहस भएको सुनिन्छ । लोकतान्त्रिक संरचनालाई बलियो, चुस्त, पारदर्शी र सक्षम बनाउनतिर उदासीन हुने, राम्रोसित कार्यसम्पादन र सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अनि जनचासोका मुद्दालाई अर्कोतिर मोड्ने कार्य नसच्याई लोकतन्त्र अलापेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ? प्रतिगमन रोकिन्छ ?
नागरिक अगुवा तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले विकासको सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठाएका थिए ! भूकम्पअगाडिको बारपाक र भूकम्पपछाडि निर्माण भएको बारपाकको मौलिकता तुलना गरेर विकासबारे बहस खोइ ? के बारपाक राम्रो बन्यो ? हाम्रो शहरमा श्वास लिने हावाको बिग्रँदो गुणस्तरबारे प्रश्न खोइ ? विकासको अहिलेको बुझाइले हाम्रा सम्पदाप्रतिको उदासीनताबारे प्रश्न खोइ ? खोकनामा पुलिस लगाएर जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) गरेर त्यहाँको बस्तीको मौलिकता मास्न खोजिँदा त्यसमा किन हाम्रो एजेण्डा बनेन ? वास्तवमा यी प्रश्नहरूले हाम्रा विकासका अभ्यासले हामीलाई कता लाँदै छ भन्ने संकेत गर्छन् ।
केही वर्षअगाडि कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि हाम्रो विकासको अभ्यासबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा अगाडि सारेका थिए । उनले काठमाडौंको सडक बिस्तारले ट्राफिक समस्या हल हुन नसक्ने निष्कर्षसहितको एउटा अध्ययनबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
हामी गाडीको संख्या थप्दै जाने, बाटो फराकिलो बनाउने नाममा अन्धाधुन्ध भत्काउँदै गर्ने, बनाएर नभ्याउँदै फेरि मेलम्चीको पाइप बिछ्याउने भनेर भत्काउने अनि फेरि केही वर्षपछि बत्ती/टेलिफोनका तार जमिनमुनि बिछ्याउने नाममा भत्काउने कार्यले दशकौँसम्म वायु प्रदूषण र ट्राफिक समस्या रहिरहने थापाकाे निष्कर्ष थियो । उनले दिएको सुझावअनुसार सडक फराकिलो बनाउने होइन, बरु फुटपाथ फराकिलो चाहिन्छ र सम्पूर्ण खानेपानी ढल तार त्यसैमुनि बिछ्याउँदा सडक भत्काउनु पर्दैन । साथै, एकै पटकमा धेरै मानिस बोक्ने मेट्रो बस सञ्चालन गर्ने र सवारीसाधन थप्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने सुझाव थियो उनकाे । राजनीतिक वृत्तमा पनि यस किसिमका प्राज्ञिक बहस जरुरी हो तर बिनातथ्य / तथ्यांक सुनेकै भरमा गफ हाँक्ने प्रवृत्ति हावी छ राजनीतिक दलहरूमा ।
अहिले अलकत्राबाट पिच गर्ने कुरालाई भन्दा ढलानलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ, नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन केही वर्षयता निकै नै बढेपछि सिमेन्ट उद्योगहरूले लबिङ गरेकाले सिमेन्टको खपत बढाउन यस्तो गरिएको बताए । वास्तवमा हाम्रा विकास कसैका स्वार्थअनुसार घिसारिएका छन् भन्ने लाग्यो ।
एकातिर हाम्रा साना योजना र विकासका गतिविधिहरू व्यवस्थित छैनन्, गुणस्तरीय काम बन्न सकेका छैनन्, कैयौँ गलत नियत र स्वार्थले परिचालित छन् भने अर्कोतिर ठूला राष्ट्रिय गौरवका अर्थात 'गेम चेञ्जर' भनिएका आयोजनाहरू राजनीतिक दाउपेचमा पर्ने गरेका छन्, कमिसनको चर्चा चल्ने गरेको छ । एउटा सरकारले गरेको ठेक्काको निर्णय अर्को सरकारको पालामा रद्द हुनु, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै गति प्रदान गर्छ भनिएका आयोजना वर्षौंसम्म अन्योलग्रस्त बन्नु, वातावरणीय पक्षबारे पर्याप्त बहस नहुँदा विरोधाभास देखिनुजस्ता थुप्रै समस्या सजिलै हल हुने देखिँदैनन् ।
वर्षौंदेखि बहसमा आएका मेलम्ची, बुढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थल, पश्चिम सेती, फास्ट ट्रयाकजस्ता ठूला आयोजनामा समेत खेलबाड गरियो, अलपत्रजस्तै छन् । केही वर्षयता चर्को स्वरमा आएको रेल र पानीजहाजको महत्त्वाकांक्षा झन् कसरी पूरा हुने हो ? हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन, नयाँ विकसित प्रविधिले अहिले सुपर कन्डक्टरबाट चल्ने म्याग्लेभ, हाइपर लुपका अवधारणा आउँदै गर्दा हामी कस्तो रेल ल्याउँदै छौँ, कसको चासो र स्वार्थअनुसार आउने हो, अन्योल छ । बिडम्बना यो छ कि, ठूला पूर्वाधार विकासका बारेमा इन्जिनियर, विज्ञ, अर्थ-वाणिज्यका जानकारले होइन, नेताले सिकाउँछन् भने स्थानीयस्तरमा ठेक्कापट्टा गर्ने र अध्ययन नभएका राजनीतिक कार्यकर्ताले सिकाउँछन् ।
गत वर्ष एक जना अमेरिकी नागरिकसित एउटा भेटमा पूर्वाधार विकासबारे हाम्रो अनौपचारिक गफ भएको थियो । उनी लामो समय सडक इञ्जिनियरिङमा काम गरेर अवकाश भएका रहेछन् । उनी भन्दै थिए, 'अमेरिकी सडकहरूको मोडलभन्दा युरोपका सडकहरू ठीक छन्, साँघुरा भए पनि युरोपका सडकहरूमा यातायात आवागमनको व्यवस्थापन राम्रो छ । तर, अमेरिकाका कैयौँ फराकिला र लामा सडकहरू यस्ता छन्, जहाँ मुस्किलले दिनभरमा केही गाडी मात्र गुड्छन, ती सडकहरूबाट खासै आर्थिक लाभ आउँदैन । अर्कोतिर व्यक्तिगत कारमा सहज पहुँचले कारको संख्या अत्यधिक हुँदा कैयौँ सहरमा ट्राफिक समस्या पनि उत्तिकै छ ।'
उनी अमेरिकी विकासको मोडलमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै थिए । त्यसैले चाहे विकसित भनिएका देश हुन् वा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित, अबका दिनहरूमा दिगो विकासका अवधारणासित केवल ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुरा मात्रै आउँदैनन्, पर्यावरणमैत्री, निम्नवर्गका जनताले समेत आर्थिक लाभ लिन सक्ने, पुनर्प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्रीको प्रयोग, जनस्वास्थ्यमा जोखिम नआउने, आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन, खुसियाली पनि पैदा गराउने किसिमका विकासका मोडलहरू अगाडि सार्नुपर्ने आवाज बिस्तारै ठूलो हुँदै गएको छ । त्यसलाई अझ बुलन्द बनाउन लागिपर्ने कि ?